Maxay Ka Wada Hadleen Madaxweynaha Galmudug Iyo James Swan? – Great Banaadir
Kulanka ayaa waxaa looga hadlay arrimo kala duwan oo ay kamid yihiin Doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan dhammadka sanadkaan 2020-ka iyo horaanta 2021-ka, xoojinta amniga iyo Iskaashiga Dowladda Federaalka iyo Galmudug.
Sidoo kale ayaa waxaa qeyb ka ahaa Wakiiladda Beesha Caalamka sida; Nicole Miller (Wakiilka EU), Francico Madeira (Wakiilka AU), iyo Jamaal Axmed (Wakiilka IGAD), kuwaasi oo kamid ahaa wafdiga uu hogaaminayay James Swan.
Wakiilka QM ee Soomaaliya iyo xubno sare oo ka socday Beesha Caalamka ayaa dhawaan socdaal ku tegay Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay, iyagoona kulan al qaatay Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicsiis Lafta-gareen. – Radio Dalsan